Ch 15 लूका – 2माछा
घर / बाइबल / लूका को सुसमाचार / Ch 15 लूका
15:1 अब कर उठाउनेहरू र पापीहरू उहाँलाई नजिक चित्रकला थिए, तिनीहरूले उहाँलाई सुन्न सक्छ त.
15:2 र फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले गनगन गरे, यसो, "यो एक पापी स्वीकार र तिनीहरूलाई खान्छ।"
15:3 अनि उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, यसो:
15:4 "तपाईं बीचमा के मानिस, जो एक सय भेडा छ, र उहाँले तिनीहरूलाई एक गुमाएका भने, मरुभूमिमा मा नब्बे-नौ छोड्न थियो र उहाँले गुमाएका थिए जसलाई एक पछि जाने, सम्म त्यो पाता?
15:5 अनि जब त्यो फेला परेन छ, उहाँले आफ्नो काँध मा स्थानहरूलाई, आनन्दित.
15:6 र घर फर्केपछि, उहाँले आफ्नो मित्र र छिमेकी सँगै भनिएको, तिनीहरूलाई यसो: 'मलाई बधाई! म मेरा भेडा पाएका, जो थियो हराएको। '
15:7 म तपाईंलाई भन्न, त्यहाँ repenting एक पापी भन्दा स्वर्गमा यति अधिक आनन्द हुनेछ, भन्दा नौ नब्बे-को भन्दा बस, जसले पश्चात्ताप गर्न आवश्यक छैन.
15:8 वा के महिला, दस drachmas भएको, यदि त्यो एक ड्राच्मा गुमाएका हुनेछ, मैनबत्ती प्रकाश छैन, र घरमा झाडू, त्यो यो पाता सम्म र लगनशील भई खोजी?
15:9 र त्यो बेला यो पत्ता लगाएको छ, त्यो उनको मित्र र छिमेकी सँगै भनिएको, यसो: 'मलाई रमाओ! लागि म ड्राच्मा पाएका, जो म गुमाएका थिए। '
15:10 त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यहाँ पश्चात्ताप छ जो पनि एक पापी भन्दा परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूलाई अघि आनन्द हुनेछ। "
15:11 अनि उहाँले भन्नुभयो: "एकजना मानिसले दुई छोराहरू थिए.
15:12 र तिनीहरूलाई को साना पिता भन्नुभयो, 'बुबा, मलाई मलाई जाने जो आफ्नो सम्पत्ति को भाग दिन। 'अनि उहाँले तिनीहरूलाई बीच सम्पत्ति विभाजित.
15:13 र धेरै छैन दिन पछि, कान्छो छोरा, यो सबै सँगै भेला, टाढा क्षेत्रमा लामो यात्रामा बाहिर सेट. र त्यहाँ, उहाँले आफ्नो पदार्थ dissipated, लक्जरी बाँचिरहेका.
15:14 र त्यो सबै खपत थियो पछि, एक ठूलो अनिकाल भनेर क्षेत्रमा देखा पर्यो, र उहाँले खाँचो हुन थाले.
15:15 र त्यो क्षेत्र को नागरिक को एक आफूलाई गए र संलग्न. अनि उहाँले आफ्नो खेत उसलाई पठाएको, यस सुँगुर खुवाउन क्रममा.
15:16 अनि उहाँले सुँगुर खाए कि स्क्रापहरू आफ्नो पेट भर्न चाहन्थे. तर कुनै एक उहाँलाई यो दिन थियो.
15:17 र आफ्नो सचेत फर्केपछि, उहाँले भन्नुभयो: 'मेरो बुबाको घरमा कति भाडामा लिएको हात प्रशस्त रोटी छ, म अनिकाल यहाँ नष्ट गर्दा!
15:18 म खडा र मेरो बुबालाई जानेछौ, र म उसलाई भन्न हुनेछ: पिता, म स्वर्गमा विरुद्ध र तपाईंले पहिले पाप गरेका छन्.
15:19 म आफ्नो छोरा कहलाइन योग्य छैन. मलाई आफ्नो भाडामा लिएको हात को एक गर्नुहोस्। '
15:20 र माथि बढ्दो, उहाँले आफ्नो बुबालाई गए. तर त्यो एक दूरी मा छँदै, उहाँलाई उहाँको पुर्खा देखे, र उहाँले दया संग सारियो, र तिनलाई चलिरहेको, उहाँले आफ्नो घाँटी मा गिर र उहाँलाई चुम्बन.
15:21 र छोरा उहाँलाई भने: 'बुबा, म स्वर्गमा विरुद्ध र तपाईंले पहिले पाप गरेका छन्. अब म तपाईंको छोरा कहलाइन योग्य छैन। '
15:22 तर पिता आफ्ना सेवकहरूलाई भने: 'तुरुन्तै! बाहिर सबै भन्दा राम्रो ओढ्ने ल्याउन, र यो उहाँको लुगा लगाइदिएनौ. र आफ्नो खुट्टा मा आफ्नो हात र जूता मा घन्टी राख्न.
15:23 र यहाँ fatted बाछो ल्याउन, र यो मार्न. र हामीलाई खान गरौं र भोज पकड.
15:24 मेरो यो छोरा मरेको थियो लागि, र पुनर्जीवित छ; उहाँले हराएको थियो, र पाइन्छ। 'अनि तिनीहरूले भोज गर्न थाले.
15:25 तर उसको जेठो छोरा खेतमा थियो. अनि उहाँले फर्कंदा र घर नजिक, उहाँले संगीत र नृत्य सुने.
15:26 अनि उहाँले सेवकहरूको एक भनिन्छ, र उहाँले यी कुराहरू अर्थ के तिनलाई प्रश्न.
15:27 अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो: 'तपाईंको भाइ फर्केको छ, र आफ्नो पिता fatted बाछो मारे छ, किनभने उहाँले सुरक्षित उहाँलाई प्राप्त गरेको छ। '
15:28 त्यसपछि उहाँले रिसाए, र उहाँले प्रविष्ट गर्न अनिच्छुक थियो. त्यसैले, आफ्नो बुबा, बाहिर जा, उसलाई बिन्ती गर्न थाले.
15:29 र प्रतिक्रिया, उहाँले आफ्नो बुबालाई भने: 'हेर, म त धेरै वर्ष को लागि तपाईं सेवा गरिएको छ. र म तपाईंको आज्ञा transgressed कहिल्यै. र अझै, तपाईं मलाई कहिल्यै पनि एक जवान बाख्रा दिएको छ, म मेरो साथी संग भोज सक्छ त.
15:30 यद्यपि तिम्रो छोरा पछि फिर्ता, जो छाडा महिला आफ्नो पदार्थ devoured छ, तपाईं उसलाई लागि fatted बाछो मारे छन्। '
15:31 तर उहाँले उसलाई भन्नुभयो: 'छोरा, तपाईं सधैं मेरो साथ हो, र म सबै तपाईंकै हो.
15:32 तर यो भोजमा र रमाउने आवश्यक थियो. तिम्रो यस भाइ मरेको थियो लागि, र पुनर्जीवित छ; उहाँले हराएको थियो, र पाइन्छ। ' "